दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २९ गते शुक्रबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १५ - Sutra TV - Digital News Portal Sutra TV
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २९ गते शुक्रबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १५
मेष : तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। कार्डमा एकजना रोचक व्यक्तिसँग भेट हुने सम्भावना देखिन्छ। आफ्नो क्यारियरको आशा बढाउनको लागि आफ्नो व्यावसायिक शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो गतिविधिको क्षेत्रमा असीमित सफलता पाउने सम्भावना छ। धेरै फाइदा पाउन आफ्नो सबै कौशल लगाउनुहोस्। आज, तपाईंले आफ्नो विवाहको दिन गरेका सबै भाकल साँचा रहेछन् भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। आफ्नो जोडी तपाईंको प्राण हो।
वृष : तपाईंको मनमा अनावश्यक विचार आउन नदिनुहोस्। तपाईंको मानसिक दृढता बढाउन शान्त र तनाउ मुक्त बस्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले मद्दत गर्नु पर्ने परिवारका सदस्यहरूको लागि यस समयको फाइदा लिनुहोस्। रोमान्टिक अमूर्तताले तपाईंको आनन्दमा मसला थप्नेछ। आज तपाईंले काममा साँच्चै नै केही उत्कृष्ट कार्य गर्न सक्नु हुनेछ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसित आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय बिताउनु हुनेछ।
मिथुन : तपाईंको अथाह प्रयास र परिवारका सदस्यहरूको समसामयिक सहयोगले इच्छित परिणाम ल्याउने थियो। तर अहिलेको झैं जाँगर कायम राख्न कठिन कार्य गरिरहनुहोस्। भावनात्मक आश्वासन खोज्नेहरूको सहायता गर्न आफुभन्दा ठूला मान्छे आउने छन्। प्रेममा मग्न भएकाहरूले प्रेमको संगीत सबै समय सुन्दछन्। आज तपाईंले यो संसारका सबै गीतहरू भूल्ने त्यो संगीत सुन्नु हुनेछ। कार्यस्थलमा वरिष्ठ साथै सहयोगिहरुबाट समर्थन प्राप्त हुनाले तपाईंको हौसला बढ्नेछ। विवाह पछिको प्रेम गाह्रो झैं लाग्छ, तर यो दिनैभरि तपाईंलाई भइरहेको छ।
कर्कट : तपाईंले आफ्नो शारीरिक शक्ति कायम राख्न खेलमा आफ्नो समय बिताउने सम्भावना छ। तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि तपाईंको भाइ तपाईंले सोचे भन्दा अझ बढी सहयोगी हुनेछ। तपाईंले आफ्नो जीवन भन्दा बढी तपाईंलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।
सिंह : तपाईंको हडबडे व्यवहारले एउटा मित्रलाई केही समस्या पैदा गर्न सक्छ। आफ्नो भाइ तपाईंको उद्धार गर्न आउनेछ। एक( अर्कालाई खुसी बनाउन सहयोग र समन्वयसंग काम गर्नु धेरै आवश्यक छ। सहयोग जीवनको मुख्य वसन्त हो भन्ने जान्नुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो प्रियलाई आफ्नो भावना व्यक्त गर्न असमर्थ हुनुहुनेछ। तपाईंको मुड नराम्रो भएकोले आफ्नो जोडीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ।
कन्या : आफ्नो आहारको विषयमा उचित ध्यान राख्नुहोस् र अधकपालीका विरामीहरुले विशेष गरेर खाना खान बिर्सिनु हुँदैन अन्यथा तिनीहरूलाई अनावश्यक भावनात्मक तनाव हुन सक्छ। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। आज तपाईंमा आफ्नो उद्देश्य साधारण रूपमा तपाईंले गरेभन्दा उँचो बनाउने झुकाव छ, यदि परिणाम आफ्नो आशाको अनुरूप नभए तापनि निराश नहुनुहोस्। तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा रोचक कुरा होस भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने, तपाईंले केही राहत पाउने पक्का छ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीको मायाम जीवनका सबै कठिनाइहरू बिर्सिनु हुनेछ।
तुला : तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। तपाईंको सहयोगको आवश्यकता पर्ने साथीहरूलाई भेट्नुहोस्। प्रेममा सफल बनाउनको लागि कसैलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईंले आज उँचो ज्याला र राम्रो पदमा पुर्‍याउने थप जिम्मेवारी छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग राय मागे नलजाइकन दिनुहोस् किनभने यसको लागि तपाईंको अत्यधिक कदर गरिनेछ। तपाईंलाई पाएर तपाईंको जोडी आफैंलाई भाग्यमानी मान्छ जस्तो लाग्छ। आज यस क्षणको राम्रो उपयोग गर्नुहोस्।
वृश्चिक : क्षणिक आवेगले निर्णय लिन हतार नगर्नुहोस् किनकि यसले छोराछोरीको चासोलाई हानि पुर्याउन सक्छ। परिवारका सदस्यहरूलेको हंसमुख प्रकृतिले घरको वातावरण रमाइलो हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्दा कठिनाई हुनेछ। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको व्यञ्जनहरुको प्रलोभन् वा अंगालो जस्ता साना मागहरूको बेवास्ता गर्नुभयो भने उनी दुखी हुन सक्नु हुनेछ।
धनु : तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंको रोमान्टिक साथीले तपाईंमाथि चापलूसी गर्ने कुरामा सावधान रहनुहोस्, यो संसारमा मलाई एक्लो नछोड्नुहोस्। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। आफ्नो ठूलो भरोसाको फाइदा लिएर बाहिर जानुहोस् र केही नयाँ सम्पर्क र मित्र बनाउनुहोस्। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ।
मकर : तपाईंको व्यक्तित्वले आज अत्तरको झैं काम गर्नेछ। परिवारका सदस्य वा जोडीले केही खिचलो निकाल्नेछन्। प्रेम असीम छ, प्रेम असीमित छ, तपाईंले अघि पनि यी कुराहरू सुनेको हुनुपर्छ। तर आज, तपाईंले यसलाई अनुभव गर्नुहुनेछ। केही कुरा हुन्छ भनेर नपर्खिनुहोस्, बाहिर निस्केर नयाँ अवसर खोज्नुहोस्। तपाईं र तपाईंको जोडीबीच विश्वासको धेरै कमी हुनेछ। यसले विवाहमा तनाव ल्याउन सक्छ।
कुम्भ : पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्नेछ र तपाईंको मनमा तनाव ल्याउनेछ। तपाईंकी प्रियतमाका कठोर शब्दहरूले तपाईंको मुड व्यग्र हुन सक्छ। आफ्नो नयाँ योजना राम्ररी बुझ्नको लागि तपाईंले महत्त्वपूर्ण र महत मान्छे भेट्ने उचित दिन। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
मीन : तपाईंको बाल्य प्रकृति निस्किने छ र तपाईंमा चञ्चल मुड आउनेछ। आज तपाईंले घरमा अरूलाई अपमान गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन र आफ्नो परिवारको आवश्यकता अनुकूल हुनुपर्छ। प्रेमी जीवन थोरै कठिन हुन सक्छ। तपाईं एक दिनको बिदामा जानु हुँदैछ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईंको अनुपस्थितिमा पनि काम सजिलै चल्नेछ। कुनै अनौठो कारणले गर्दा समस्या भएमा, तपाईं फर्केर आएपछि यसलाई सजिलै समाधान गर्नुहुनेछ। आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको दैनिक आवश्यकता पूरा नगर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईंको मुड बिग्रिनेछ।
मंगलबार कुन राशिको भाग्य चम्केला ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल
आज सोमबार, कस्तो छ तपाइको भाग्य? पढौं राशिफल
आज आइतबार, कस्तो छ तपाइको दिन? पढौं राशिफल
मङ्सिर २१ गते शनिबार, कुन राशिका लागि कति शुभ ? हेर्नुहोस आजको राशिफल
मङ्सिर २० गते शुक्रबार कुन राशिका लागि शुभ रहला ? हेर्नुहोस आजको राशिफल
प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च २ लाख ५४ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ
बिहे अघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
छ सिडियो र पाँच न्यायाधीशको सरुवा, कसको कहाँ? (नामसूची)
कोहलपुर उग्र तनावमा, डिएसपी सहित ९ प्रहरी घाइते
उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरू कारबाहीमा पर्ने, सरकारी जग्गा नछोडे डोजर चलाइने
सेक्स गर्दा महिलाको गुप्ताङ्गमै कण्डम अड्किए के गर्ने ?
चर्चित कोरियन कलाकार घरमा मृत भेटिए
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद : अन्तिम दिन आज ५ खेल, प्रधानमन्त्रीको भिडियो कन्फरेन्सबाट सम्वोधन
कपिल शर्मालाई पुत्री लाभ
६३५ मेगावाटको दूधकोसी आयोजना निर्माण हुने
जापानी भाषा परिक्षामा नेपाल सबैभन्दा कमजोर
कलंकी-महाराजगञ्ज सडक विस्तार फागुनबाट
दूतावासको लापरवाहीका कारण २१ नेपाली कामदार कालोसूचीमा
निगम आफैँले ८८ करोड मूल्यांकन गरेको बोइङ ४८ करोडमा बेच्न टेन्डर!